इन्भेष्टर्स फोरमको अपिलले धानिएन नेप्से, किन ओरालो लाग्दैछ बजार ? - BizKhabar Online
इन्भेष्टर्स फोरमको अपिलले धानिएन नेप्से, किन ओरालो लाग्दैछ बजार ?
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले घट्दो बजारको बारेमा सम्बद्ध सरोकारवाला नियकाको ध्यानाकर्षण गराएपनि बजार ओरालो लाग्ने क्रम भने रोकिएन । विज्ञप्ती जारी गरेर लगानीकर्तालाई साबधानी अपनाउन अपिल गरेको पहिलो दिन बजारमा केही आशा पलाएपनि त्यसको भोलीपल्ट नेप्से परिसुचक २१ अंकभन्दा बढीले ओरालो लागेको छ ।
इन्भेष्टर्स फोरमले बजारमा अधिक तरलता रहेको र पछिल्लो समय ब्याजदर पनि सोही अनुरुप घटेका कारण लगानीकर्तालाई बिचलित नहुन अपिल गरेको थियो । फोरममा संलग्न केही ठूला लगानीकर्ताले बिचलित नहुन आग्रह गरेपनि साना लगानीकर्ताहरुले भने घटेर भएपनि सेयर बिक्री गर्न थालेका हुन् ।
नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीले धमाधम नगद तथा बोनस सेयरको घोषणा गरिरहँदा बजार घट्नु आश्चर्यजन भएको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘कम्पनीहरुले बोनस घोषणा गर्दा बजार बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसको ठिक विपरित बजार घटिरहेको छ ।’
मंगलबार बजारमा अतिरिक्त बाहेक सबै समुहका परिसुचक ओरालो लागेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी बीमा कम्पनीको १ सय ८५ अंकले ओरालो लागेको छ । यसैगरी बजारमा बढी प्रभाव रहेको बैंकिङ समुहको परिसुचक पनि १८ अंकभन्दा बढीले घट्न पुगेको छ ।
बजारमा विकास बैंक समुहको परिसुचक झण्डै ३० अंकले घटेको छ भने फाइनान्स समुहको परिसुचक पनि १४ अंकभन्दा बढीले ओरालो लागेको छ । यसैगरी होटल समुह ४२ अंक र जलविद्युत समुहको परिसुचक १४ अंकभन्दा बढीले घटेका छन् ।
बजारमा कारोबार रकम पनि बढ्न सकेन । दिनभर कुल ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । मंगलबार १ सय ५३ कम्पनीको १० लाख ७० हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको साढे ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
लगातार ओरालो लाग्दै नेप्से, कारोबार रकमले पनि दिएन साथ
थिग्रदै सेयर बजार, सरकारले अतिरिक्त कर स्थगित गरेको भोलिपल्दै २६ अंकको गिरावट
आन्तरिक राजस्वको पत्रको असर सेयर बजारमा, नेप्सेमा ३४ अंकको पहिरो
सेयर बजारलाई कारोबार रकमले पनि छाड्यो साथ, के होला अब ?